लक्सर मन्दिर एक अत्यावश्यक भ्रमण जुन तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ Absolut यात्रा
सुसाना Godoy | | मिश्र
पुरातन इजिप्टेली शहर थेबेस अझै पनी यो के राम्रो उदाहरण छोड्छ। यो सत्य हो कि यो पहिले नै भग्नावशेषको रूपमा छ, तर ती मध्ये एउटा राम्रो भ्रमणको लागि योग्य छ। यस पैदल यात्रामा हामी उसलाई भेट्छौं लक्सर मन्दिर। इजिप्टको इतिहासको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ठाउँ मध्ये एक।
यति धेरै कि हामी अझै पनि भाग कसरी देख्न सक्छौं ईतिहास र यसका महापुरूषहरू पनि, तिनीहरू अझै पनि यस ठाउँमा आराम गर्छन्। आज हामी यी सबैको टुरि। लिनेछौं, हामी पछाडि हेर्नेछौं र यसमा लुकाइएको सबै कुरा पत्ता लगाउनेछौं, जुन केहि विवरणहरू होइन। के हामी लक्सरको मन्दिरमा जान्छौं?
1 जहाँ लक्सर मन्दिर अवस्थित छ
2 मन्दिरको इतिहास
3 लक्सर मन्दिरको मुख्य भाग
4 मन्दिरको प्रवेशद्वारमा कति खर्च हुन्छ?
5 लक्सर मन्दिरको भ्रमण गर्न कहिले रमाइलो गर्नुहुन्छ?
जहाँ लक्सर मन्दिर अवस्थित छ
यसले ठ्याक्कै यो नाम लिन्छ किनभने यो लक्सरमा अवस्थित छ जुन एउटा शहर हो जुन गुलाब भयो Thebes को ठाउँमा। हुनसक्छ यो तपाईलाई पक्का नै थाहा छ जुन प्राचीन मिस्रको राजधानी हो। नील नदीको पछाडि लक्सर छ, जुन हामी भन्छौ मुख्य क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। क्षेत्र जुन एक मरुभूमि छ र त्यो º०º र अधिकसम्म पुग्छ, गर्मि समयमा। त्यस ठाउँको नाम यसमा रहेका दरबारहरू वा मन्दिरहरूका लागि धन्यवाद दिइन्छ: दुबै हो जुन आज नायक हो र अमुन-रा र कर्णकको समर्पित हो। त्यसोभए यदि तपाइँ लक्सर मन्दिर हेर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले शहरमा जानु पर्छ किनकि यो त्यसको केन्द्रमा छ।
यो मन्दिर नयाँ राज्यको बखत बनाइएको थियो। थप रूपमा, यो अर्कोसँग जोडिएको छ जुन हामीले भर्खर उल्लेख गर्यौं जुन कर्णकको हो। यो एक प्रकारको एवेन्यू थियो जुन दुबै ठाउँहरू साझा गरियो र यो स्फिंक्स भरियो। यसैले मन्दिर क्षेत्र फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। यो एक स्थान हो जुन पत्ता लगाउन धेरै भागहरू थियो। एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्यका रूपमा यो जान्नु आवश्यक छ कि यो दुई फारोले निर्माण गरेका थिए जो आन्मेरोटेप तृतीय थिए जुन आन्तरिक क्षेत्र उचाल्ने जिम्मामा थिए। अर्को तर्फ, दोस्रो को फिरऊनहरू रमेसेस दोस्रो थिए कसले यसलाई आफैंमा लिए यो पूरा गर्न।
यद्यपि तिनीहरू मुख्य व्यक्तिहरू थिए, यो सत्य हो कि त्यहाँ अरू कोही थिए जसले यस स्थानमा विवरणहरू थपेका थिए, जसलाई उनले राखेका वस्तुहरू जस्तै सजावटी appliques को रूपमा। Tutankhamun र पनि अलेक्ज्याण्डर महान। रोमन समयमा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सैन्य शिविरहरु मध्ये एक भएको छ। यो सत्य हो कि धेरै बर्षमा महत्त्वपूर्ण अंशहरू हराइसकेका छन्, तर अरू धेरै अझै बाँकी छन्। तपाईं आँगनहरू र कोठाहरू देख्न सक्नुहुनेछ, जो अझै पनी आफ्नै टाईलहरू छन्।
लक्सर मन्दिरको मुख्य भाग
निस्सन्देह फिरऊनहरूले कुनै खर्च जोगाएनन् जब यो एक देवतालाई समर्पित मन्दिर बनाउनको लागि आयो। यस अवस्थामा, यो आकाश र सूर्यको ईश्वरको लागि थियो। त्यसोभए केहि गर्नु पर्ने थियो। यसैले, एकतर्फी हामी राम्ररी फेला पार्दछौं 'ड्रमोज'। एवेन्यू वा केन्द्रीय भाग पार गर्न सक्षम हुन बराबरको नाम। जब तपाईं अगाडिको ढोकामा पुग्नुभयो तपाईंलाई दुई ठूला ओब्लिस्कले अभिवादन गरे। यद्यपि यो स्पष्ट पार्नुपर्दछ कि ती मध्ये एकलाई पेरिसको प्लाजा डे ला कन्कोर्डमा लगिएको थियो।
तैपनि, हामी दुईवटा मूर्तिहरू मार्छौं जुन प्रत्येक पक्षमा विराजमान छन् र यसले उत्कृष्ट स्वागत पनि दिन्छ। जहाँसम्म हामी भन्छौ, तिनीहरू प्रवेशद्वारको अगाडि छन् र रामसेस II का छविहरू। एक पटक भित्र तपाई आँगन क्षेत्रको प्रशंसा गर्न सक्नुहुनेछ, साथ साथै कोलोनेड वा एट्रियम। मन्दिरको मुख्य कुकुरहरू। कोठाको कुरा मा हामी प्रस्ताव कोठा कोठा को रूपमा समर्पित कोठा पाउन मट जो स्वर्गकी देवी थिए र अर्को, जोन्सुलाई समर्पित जो चन्द्र भगवान थिए। जन्म कोठा र बिभिन्न अभयारण्यहरू बिर्सिएन। यो बिर्सिएन कि उत्तरी भागमा पनि, यो मस्जिद छ, यस प्रकारले मिश्री र इस्लामिक विवरणहरू संयोजन गर्दछ।
मन्दिरको प्रवेशद्वारमा कति खर्च हुन्छ?
सत्य यो हो कि लक्सरको अन्वेषण गर्न असीम कुनाहरू छन्। त्यसकारण जब हामी यसलाई पूर्ण रूपमा गर्न चाहान्छौं र केवल मन्दिरको अनुहारमा मात्र होइन, यो एक मार्गनिर्देशन छनौट गर्न सल्लाह दिइन्छ। मन्दिरको मामलामा यो पनि यसका सबै अंशहरू र ती प्रत्येकमा भएका कथाहरूको लागि राम्रो विकल्प हो। को लक्सरको मन्दिरको भ्रमणको मूल्य यो 7,50० युरो हो, जुन इजिप्टियन पाउन्ड परिवर्तन भएकोमा १ 140० ईजीपी हो। जबकि छिमेकी मन्दिर, कर्णकको १ 150० ईजीपीको मूल्य छ जुन लगभग 8 यूरो हुनेछ (तपाईंसँग यो केवल केही किलोमिटर टाढा छ र स्फिंक्सको ठाउँबाट जोडिएको छ)। यो एकसँग खुला-एयर संग्रहालय पनि छ, जसको लागि हामी E० EGP तिर्न सक्दछौं, अर्थात् 80..२4,27 युरो। याद गर्नुहोस् कि घण्टा फरक हुन सक्छ, त्यसैले पहिले सोधपुछ गर्नु राम्रो हुन्छ।
लक्सर मन्दिरको भ्रमण गर्न कहिले रमाइलो गर्नुहुन्छ?
यो सत्य हो कि हामी ग्रीष्म seasonतुको लागि यस प्रकारको यात्रा गर्न रोज्दछौं। किनभने त्यसबेला जब हामी वास्तवमै छुट्टीहरू हुन्छौं। तर यस अवस्थामा शरद महिना। कुनै पनि भन्दा बढि किनभने गर्मी मा तापक्रम वास्तवमै उच्च छ, º०º सम्म बढ्दै। यस बाहेक त्यहाँ अरु धेरै मानिसहरु छन्। यो सत्य हो कि यस खाली ठाउँ भेट्टाउनु धेरै जटिल कार्य हो। तर सब भन्दा विशेषता महिनाहरु बाट टाढा सर्दै र शरद onesतु को विकल्प को लागी, हामी केहि बढी आराम गरी हिंड्न सक्छौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » लक्सर मन्दिर
म्युनिकमा के हेर्ने?